Miodwga Yurub iyo shaqaale dibadda uga yimaada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miodwga Yurub iyo shaqaale dibadda uga yimaada
La daabacay onsdag 24 oktober 2007 kl 15.47
Maamulka dhexe ee ururka ey ku bahoobeen waddammada xubnaha ka ah ururka miodwga Yurub EU, ayaa ku tala jira iney abuuraan nidaam ey 27-ka dal ka mideysan yihiin lana xiriira sidii loo suurtagelin lahaa in dad aqoon leh laga keensado waddammada ka baxsan qaaradda Yurub, si ey uga howlgalaan.
Nidaam noocaniya ayey isticmaalaan dalalka Awstralia, Kanada iyo Mareykanka oo isagu bixiya waxa loo yaqaan kaarka cagaaran ee sannadkiiba tartan lagu siiyo dad tiradoodu gaareyso 20 kun oo ruux.
Midowga Yurub ayaa middaa mid la mid ah ku tala jira uguna magac darey kaarka buluugga.
- Waa fikir aan aad u dhaleysceyneyno, maadaama uu nidaan noocaniya albaabada ka xiraneyo qaxooti aad u fara badan. Islamarkaana fara tiris lagu soo guraneyo dadka qaarkood. Sida uu sheegey Kalle Larsson, ahna xubin ka tirsan xisbiga bidixda ee Vänster Partiet ugana mid ah xubnaha uu xisbigaasi ku leeyahey baarlamanka.
Middaa oo wax laga weydiiyey wasiirka Socdaalka Topias Billström waxaa haddalladiisii ka mid ahaa.
- Aad ayaan ugu qanacsanahey in maamulka ururka EU-du uu soo jeediyo fikir noocaasiya ee suurtagelineya in dhammaan 27-ka dal ey middaa ka sinnaadaan. Midda aan ku diidanaheyse waxey tahey in loo kala saaro dadka kuwo tacliin aad u sarreysa leh iyo kuwo aan laheyn.
Waa in loo daayaa suuqa shaqadu inii xaddido cidda uu u baahan yahey. Ciddii shaqa u imaneysa iney suurtagalkaa helaan. Ciddii qaxootinimo u imaneysana iney suurtagalkaa helaan. Aaneyna noqon wax is diiddan, sida uu sheegey Topias Billström. Wasiirka socdaalka ee dawladda uu madaxda ka yahey Fredrik Reinfieldt.